जापानको पासपोर्ट १ नम्बरमा नेपालको कतिमा ? - Vishwa News | Popular Nepalase News Media In USA
जापानको पासपोर्ट १ नम्बरमा नेपालको कतिमा ?
जापानीज नागरिकहरुले प्रयोग गर्ने पासपोर्ट सन २०१९ को लागि विश्वको सबै भन्दा शक्ती साली पासपोर्ट भएको छ । जापानिज पासपोर्ट बाहकले विश्वका १९० देशहरुको भ्रमण बिना भिसा वा सम्बन्धित देशको एयरपोर्टमा पुगे पछी तत्काल प्राप्त गर्ने छन् ।
इन्टरनेसनल एयर ट्रान्सपोर्ट एसोसिएसन ( आईटा ) का अनुसार शक्तीसाली पासपोर्ट वाला देशहरुको दोश्रो स्थानमा दुई वटा एसियन देशहरु सिङापुर र साउथ कोरिया परेका छन् । विश्वका १८९ वटा देशहरुको भ्रमणको लागि सिङगापुर र साउथ कोरियन जनताले भ्रमण पूर्व भिसा लिनु पर्ने छैन । पासपोर्ट इन्डेक्सको लागि काम गर्दै आएको हेनेली पासपोर्ट इन्डेक्सका अनुसार साउथ कोरिया शक्ती साली पासपोर्ट सुचीको यो स्थानमा पहिलो पटक पुगेको हो ।
जर्मनी र फ्रान्सले भने १८८ वटा देशहरुको भ्रमण पूर्व भिसा लिनु पर्ने छैन । यी दुई देश पासपोर्ट इन्डेक्सको तेस्रो स्थानमा परेका छन् । संन् २०१५ मा शक्तीशाली पासपोर्ट वाला देशका रुपमा उभिएका बेलायत र संयुक्त राज्य अमेरिका क्रमस तल झर्दै ६ स्थानमा पुगेका छन् । संन् २०१९ को पासपोर्ट श्रेणीको सबै भन्दा तल इराक र अफगानिस्तान परेका छन् जुन देशका नागरिकहरुले ३० देशको भ्रमणको लागि मात्र भ्रमणपुर्ब भिसा लिनु पर्ने छैन । चिन ६९ औ देशमा परेको छ । ७४ वटा देशहरुमा भ्रमण गर्न पूर्व भिसा लिनु पर्ने छैन । त्यसैगरी पासपोर्ट इन्डेक्सको ९८ औ स्थानमा नेपाल परेको छ । नेपाली नागरिकहरुले ४० देशको भ्रमण गर्नका लागि पूर्व भिसा लिनु पर्ने छैन ।